မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးများနေ့ ~ Nge Naing
Saturday, June 19, 2010 Nge Naing 14 comments
ပထမကြိမ် အမျိုးသမီးများနေ့ကို ချူလာလောင်ကွန် တက္ကသိုလ်မှာ ကျင်းပစဉ်က မြန်မာ့အမျိုးသမီး သမဂ္ဂမှ တက်ရောက်သည့် ကိုယ်စားလှယ် နှစ်ဦး (လက်ယာဘက်တယောက်က ၂၀၁၀ အမတ်လောင်းဆိုပြီး ကျွန်မ C-Box မှာ လာလာ နှုတ်ဆက်တတ်တဲ့ ဘလော့ဂါ မဗေဒါ (၈၈) ပါ။)
ဇွန်လ (၁၉) ရက်နေ့ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့ဆိုတာ အားလုံးလိုလို သိကြပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးများနေ့အဖြစ် သိသူတွေ အင်မတန် နည်းနေသေးတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ် ဇွန်လ (၁၉) ရက်နေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ၅၂ နှစ်နှစ်မြောက် မွေးနေ့က ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ ချူလာလောင်ကွန် တက္ကသိုလ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့ကို မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးများနေ့အဖြစ် မြန်မာ့အရေး ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မြန်မာအမျိုးသမီးများ ပူးပေါင်းပြီး မြန်မာ အမျိုးမီးများနေ့အဖြစ် စတင် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ ပြည်တွင်းက NLD အဖွဲ့ချုပ်မှာလည်း ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ နောက်နှစ်တွေမှာလည်း ပြည်ပတွေမှာ ဆက်လက်ကျင်းပလာခဲ့ပါတယ်။ ယခုနှစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ၆၅ နှစ်မြောက် မွေးနေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးများနေ့ဟာ ၁၄ ကြိမ်မြောက် ရှိပါပြီ။ ဒီနှစ်ကျရောက်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးများနေ့နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မွေးနေ့ကို သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၉) ရက်နေ့မှာ Alternative Asean Network on Burma မှ ထုတ်ဝေသည့် ၅၅ နှစ်မြောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့နဲ့ ၄ ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးများနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ထုတ်ဝေသည့် "မြန်မာနိုင်ငံမှ အမျိုးသမီးများ၏အသံ" စာအုပ် အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ရေးသားပေးပို့သည့် အမှာစကားကို ကူးယူဖေါ်ပြပြီး ၁၄ ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးများနေ့နဲ့ ၆၅ နှစ်မြောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မွေးနေ့ကို ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်။
မကြာခင်ကဆိုရင် သူ့ရဲ့သားအဖမ်းခံသွားခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသမီးကြီးတယောက်နဲ့လဲ ကျမတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအမျိုးသမီးကြီး နှစ်ယောက်ဟာ စိတ်ချင်းသဘောချင်း အတူတူပါပဲ။ မိမိတို့ ကလေးတွေ လုပ်နေတာမှန်တယ်၊ အများရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက် လုပ်နေတဲ့ကိစ္စမို့လို့ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် လက်ခံမယ်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရင်ဆိုင်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်ရှိပါတယ်။ မိန်းကလေးရဲ့ အမေဟာဆိုရင် သူ့သမီးလေး မသွားခင်မှာလိုက်တယ်၊ အမေ့ကြောင့်မို့လို့တော့ အဖွဲ့ချုပ်က လက်မှတ်ထိုးပြီး ထွက်တဲ့အဖြစ် အဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ မှာလိုက်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ အမေ့ကိုငှဲ့ပြီး ကိုယ်လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စကို မလုပ်ပဲ မနေပါနဲ့လို့ ပြောလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကြောင့် ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုဟာ အဖိနှိပ်အချုပ်အချယ်ပေါင်း များစွာကြားထဲက အရှိန်အဟုန် မလျှော့သွားပဲနဲ့။
သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀၊ ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (၅၅) နှစ်မြှောက်မွေးနေ့ နဲ့ (၄) ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးများနေ့ အထိမ်းအမှတ်ထုတ် မြန်မာ အမျိုးသမီးများအသံ စာအုပ်အတွက် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် ရေးသား ပေးပို့သည့် အမှာစကားဖြစ်ပါတယ်။
မိမိပိုင်ဆိုင်သမျှ အရာအားလုံးကို စွန့်ခွာပြီး အမိမြန်မာပြည်အတွက် လာရာက် စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံနေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တယောက် သက်တော် ရာကျော်ရှည်ပါစေ။ သူမမွေးနေ့မှာ ကောင်းသော အချိန်အခါနဲ့ ကြုံကြိုက်ပြီး အသက် ၆၅ နှစ်မှသည် မိမိကိုယ်တိုင်နဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် လိုရာဆန္ဒမှန်သမျှပြည့်ဝ ရပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
မဗေဒါ ( ၂၀၁၀ အမတ်လောင်း ) says:
June 19, 2010 at 2:58 AM Reply
ရောက်ေ၇ာက်ချင်းလာခဲ့တယ်..။ ကလေးဌာနကိုတိုင်လည်း ကိုယ်ကတော့ လျှောက်လဲချက်ကောင်းတင်ရလိမ့်မယ်.. ကိုယ့်အမှားမဟုတ်ပါ.. ။
သူငယ်ချင်းပုံကိုအခုလို အမှတ်တရ တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ..။
June 19, 2010 at 8:53 AM Reply
သူငယ်ချင်း ဓါတ်ပုံ ရှိတယ်လို့ပြောရင် တောင်းနေမှာစိုးလို့ မပြောပြဘဲ တင်လိုက်တယ်။ စိတ်မဆိုးတဲ့အပြင် ကျေးဇူးတောင် တင်နေတယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။ သူငယ်ချင်းက တော်တော် ရင့်ကျက်လာလို့ ပိုပြီး ၀မ်းသာပါတယ်။
ကလေးကို စိုးရိမ်ပြီး တယောက်တည်း လျှောက်သွားရလောက်တဲ့ အခြေအနေကို ဖြစ်စေတာ လုံခြုံမှု အပြည့်အ၀ မပေးနိုင်တာ သက်သေပြနေတဲ့အတွက် Child Neglect ပဲပေါ့။ အဲဒါအပြစ်ပေါ့ ကိုယ့်အပြစ်ကို အပြစ်လို့ ၀န်မခံတတ်တဲ့ အစိုးရတွေရဲ့ သဘောသာဝကို အမတ်လောင်း ဘ၀မှာကတည်းက အကျင့်ရနေအောင် မွေးစားနေပြီလား။ ဟီး.. ဟီး.. သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း စိတ်မဆိုးရဘူးနော့်။ အစိုးရဘက်နဲ့ NGO ဘက် အငြင်းအခုန် ဖြစ်ခဲ့ဖူးတာကိုလည်း တခါလောက် အမှတ်တရ ပို့စ်လေး တင်ဖို့ စဉ်းစားနေပါတယ်။ လာလည်တဲ့အတွက် ကျေးဇူး။
June 19, 2010 at 3:28 PM Reply
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မွေးနေ့ကို မြန်မာအမျိုးသမီး များ နေ့အဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ပေးခဲ့တဲ့ မြန်မာ့အမျိုးသမီးများကို လေးစား ချီးကျူးမိပါတယ်ဗျာ ...
June 19, 2010 at 6:15 PM Reply
စိတ်ဆိုးပါဘူး.. ဘဝက သင်ခဲ့ပြီ..။ လူဆိုတာ ထမင်းစား (ပေါင်မုန့်) သန်ရာကို စားပြီး ကြီးပျင်းလို့မရဘူးမလား..လေ့လာသင်ယူရတာတွေ အများကြီး ..နောက် လက်တွေ့လည်း ပါရပါတယ်..။ ဒါဆိုနဲနဲ ဘဝက အဆင်ပြေသည်ပေါ့..။
ပွဲသွားမယ်.. မဥမ္မာလည်း ရောက်နေတယ်..။
ရေးထားတာလည်း လာဖတ်ပါဦး.. ဒေါ်စုပြောထားတာတွေပါပဲ.. လေ့လာလို့ရအောင် တင်ပေးတာပါ..။
June 19, 2010 at 7:16 PM Reply
Dear Ma Nge, I am not in Sydney, I informed to you before I leave not sydney. I could not write burmese font. I would like to wish for Aunty Su birthday´s for 65 words.
Daw Aung San Su Kyi, she is the hope of our country. Now adays, she represents the only possibility for our people to achieve not only democracy but justice and freedom. We trust that she will open again the access to education to everyone which will allow the development of the country, the development ofamiddle class and the end of hunger and need.
June 20, 2010 at 2:09 AM Reply
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးများနေ့က ဒီနေ့ ဟုတ်လို့လား...မှားများနေလားလို့...
June 20, 2010 at 9:28 AM Reply
20 Jun 10, 02:12
ဇော်သိင်္ခ: သက်တော်ရာကျော် ရှည်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပြီး အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်နိုင်ပါစေလို့လည်း သူ့ရဲ့ 65 နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှာ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ.. (C-Box မှ ပို့စ်နဲ့ဆိုင်လို့ ကူးယူလာတယ်)
-သူငယ်ချင်း မဗေဒါ - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မိန့်ခွန်း ကောက်နှုတ်ချက်တွေ ဘလော့၈်မှာ တင်ထားတာလည်း ရှိပါတယ်။ သူများဖတ်ဖို့ဆိုတာထက် ဘလော့ဂ်မှာ သိမ်းထားချင်လို့ ထားတာပါ။
To UWW - You can read my blog from any computers with or without Burmese font setting except the messages in the C-Box. If you want to read C-Box messages you can copy and paste it into Zawgyi Convertor in sidebar. You'd see the messages which are squares in the C-box turn to text when you do that. Thanks for visiting and blessing Daw Aung Sun Suu Kyi.
Anonymous - ဟုတ်ပါတယ်။ ၁၉၉၇ ကတည်းက ကျင်းပလာပါတယ်။
June 30, 2010 at 8:51 PM Reply
မြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့သည် July3ရက်နေ့ဖြစ်သည်...
June 30, 2010 at 9:10 PM Reply
ဇူလိုင်လ သုံးရက်နေ့ကို မြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့အဖြစ် ဘယ်တုန်းက ဘယ်သူတွေက သတ်မှတ်ပြီး ဘယ်မှာ စတင် ကျင်းပလဲတော့ ကျွန်မ မသိဘူး။ ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့ကိုတော့ ပြည်တွင်းက အနိုင်ရပါတီရော ပြည်ပအဖွဲ့တွေပါ ၁၉၉၇ မှာ စတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့ကိုပဲ ကျွန်မ အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။
July 1, 2010 at 2:05 AM Reply
မြန်မာတစ်ပြည်လုံး အမျိုးသမီးများအားလုံး လက်ခံကျင့်သုံးနေကြတဲ့ အမျိုးသမီးများနေ့ ဇူလိုင် ၃ ရက်နေ့ကို အဘယ့်အတွက် အတင်းကို ဇွတ်ကို ဒေါ်စုကြည် မွေးနေ့နဲ့ ရောပြီး ကိုယ်ပေးချင်ရာ စွတ်ပေးနေရတာလဲ?
အဲဒီလို ကိုယ်ပေးချင်တိုင်းပေးလို့ရရင် မှိုလိုပေါက်နေတဲ့ နေ့တွေ ရေတွက်နိုင်မှာတောင်မဟုတ်ဘူး...သေချာတာကတော့ ငမျောက်ငချောက်အာဏာမရှိတဲ့သူတွေက ပေးတဲ့အဖွဲ့တစ်စုက ပေးချင်သလိုပေးထားတဲ့ ရက်စွဲ ထက် နိုင်ငံတော်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ အမျိုးသမီးများနေ့ ရက်စွဲသာလျှင် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ကမ္ဘာတစ်ဝန်းအသိမှတ်ပြု အကျုံးဝင်သည်....
နောင် ဘယ်အစိုးရလက်ထပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီရက်စွဲတိုင်းသာဖြစ်သည်...မိမိတို့ ပေးချင်သလိုပေးလို့ရပေမယ့် မြန်မာအမျိုးသမီးထုတွေကို မသိတဲ့သူတွေကိုေ၇ာရောင်ပြီး အတုရက်စွဲကို ပေးဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့...
July 1, 2010 at 8:39 AM Reply
Anonymous ရေ - ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့ကို အဲဒီတုန်းက ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရထားတဲ့ NLD ပါတီ ကိုယ်တိုင် ပေးထားတာ ဖြစ်ပြီး။ လက်နက်အားကိုးပြီး ပြည်သူလူထု မမေးဘဲနဲ့ အာဏာကို လက်နက်အားကိုးပြီး ယူထားတဲ့ သူတွေပေးတဲ့နေ့ကို နိုင်ငံတော်က ပေးထားတဲ့နေ့လို့ ကျွန်မတို့ အသိအမှတ်မပြုဘဲ လူထုရွေးကောက်ထားတဲ့သူတွေ ပေးထားတဲ့နေ့ကို ကျွန်မတို့ အသိအမှတ်ပြုတာ ဖြစ်တယ်။
July 1, 2010 at 7:22 PM Reply
မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ၁၉၉၂ ခုနှစ်ခန့်ကစပြီး လူကုန်ကူးမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၁၉၉၆ခုနှစ်မှာ ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ "မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးရေးရာ ကောက်မတီ"နဲ့ ၂၀၀၃ခုနှစ်မှာ ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ "မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ချုပ်"တို့ဟာ လူကုန်ကူးမှု တားဆီးရေးကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို နိုင်ငံတော်အစိုးရ နဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ် အတူပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်...
သေချာတာကတော့ မြန်မာအမျိုးသမီးလူထုအားလံုး သိထားတဲ့ တရားဝင် ရက်စွဲကတော့ ဇူလိုင်လ ၃ ရက်နေ့ပါပဲ...
July 1, 2010 at 7:32 PM Reply
လူကုန်ကူးမှု ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးတယ်လို့သာ ဆိုတယ် အမျိုးသမီးလေးတွကို ရောင်းစားခံရတဲ့ ပြဿနာက တနှစ်ထက်တနှစ် ပိုတောင်များလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ စစ်တပ်က ရှေ့တန်းဒေသတွေမှာ လူ့အခွင့်အရေးတွေ ချိုးဖေါက်ပြီး အမျိုးသမီးတွေကို အဓမ္မပြုကျင့်နေတာကိုလည်း အဲဒီ အဖွဲ့အစည်းက ဘာမှလုပ်ပေးတာ မတွေ့ရဘူး။ အာဏာသိမ်းထားတဲ့ စစ်အစိုးရအောက်မှာ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုဖို့မလိုပဲ တရားဝင် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားလို့ အနိုင်ရထားတဲ့ ပါတီက သတ်မှတ်ကျင်းပတဲ့ နေ့ကိုပဲ ကျွန်မတို့အတည်ယူပြီး အသိအမှတ်ပြု ကျင်းပတာ ဖြစ်တယ်။
July 2, 2010 at 3:55 AM Reply
Myanmar Women's Day July3day